Kaominina Sakaomadinika -Tsaratanana: ireo miaramila indray no mampihorohoro | NewsMada
Mikorontana tanteraka ny fiahiana ny fandriampahalemana any Sakaomadinika-Tsaratanàna. Tsy fantatra intsony izay tena mpanao ratsy sy mpiaro ny vahoaka. Mijoro vavolombelona ny lehilahy iray fa mamoa-doza ny miaramila any an-toerana.
Teo aloha, nampandositra ny sefo fokontany ao Tsinjorana, kaominina Sakaomadinika disitrikan’ i Tsaratanana faritra Betsiboka, ny fampihorohoroan’ny dahalo sy ny zandary. Amin’izao fotoana izao kosa, ny miaramila natao hampandry fahalemana indray no lasa biby atahoran’ny fokonolona noho izy ireo sahy maka an-keriny izay olona mijoro sy vonona hiady hanohitra ny asan-dahalo. Entin’izy ireo any amin’ny toby izay azo ka ampijaliana.
Izany ny nahazo an-dRandriamizara Dorand, ny 9 septambra asa teo. “Ny volana mey teo, nalaina an-keriny tao am-balako ny ombiko sisa tavela, miisa 14 ary norahonana ho faty aho fa hoe efa lany ny ombiko ka ny aiko indray no hanaraka…Tsy niandry ela fa nanara-dia ireo dahalo, avy hatrany, ny fokonolona. Maty voatifitry ny dahalo anefa ny roa tamin’ ireo mpanara-dia, hany ka tsy afa-nanohy intsony ny fokonolona” hoy Randriamizara Dorand. Nohamafisiny tamin’ny resaka nifanaovany tamin’ny mpanao gazety, ny alahady teo tany Toamasina, fa ny 9 septambra teo tokony ho tamin’ny 12 ora alina, nalaina miaramila, tsy latsaky 20 isa, tao an-tokantranony izy ary nentina tao amin’ ny tranon-tsekoly tao an-toerana ihany ary nampijaliana, izay tsy zakany sy nanaovana famotorana tsy mitombina, araka ny filazany. Fantatra fa nifindra any Toamasina i Dorand, nandositra ny tanànany noho ny zava-nanjo azy.
Nitohy hatrany ny fanazavany. Nisy ireny olona mahay manao ody bala ireny, avy any Mandoto-Antsirabe, manana taratasy ara-dalana ary tena mahomby amin’ny ady amin’ny dahalo. Tonga tao Sakaomadinika izy ireo ary nampiantranoan-dRandriamizara Dorand, nahazo fandrahonana, noho izy nila fanampiana vokatr’izany, araka ny nambarany.
Nisy namadika ho resaka hafa, toy ny hoe nandray dahalo, anefa izany ary izay no nisamboran’ny tafika an’i Dorand, araka ny nambaran’ito farany hatrany. Na izany aza, noafahan’ny kaomandan’ny borigady sy ny ben’ny tanàna any an-toerana izy, noho ny tsy fisian’ny porofo amin’ny fiampangana azy. Tsy niombon-kevitra ny zandary sy ny tafika teo.
Raha nanontaniana Randriamizara Dorand, nilaza izy fa tsy misy miaramila any Sakaomadinika fa avy any Antanimenambaka – Andilamena no tonga ao an-toerana. “Tsy maka hevitra amin’ny sefo fokontany sy ny ben’ny tanàna, na koa amin’ny kaomandan’ny borigady izy ireo fa avy hatrany dia misambotra olona, amin’ny misasakalina ary tsy misy taratasy avy amin’ny fitsarana. Tsy vitan’izany fa midaroka sy mampihorohoro ny olona”, hoy hatrany i Dorand.
Nohamafisin’ny vavolombelona iray fa manoloana ny trangan-javatra misy any an-tanàna efa tery lalana ny dahalo, satria lasa manana ody bala ny mponina. Noho izany, heverin’ireto farany fa misy ny firaisana tsikombakomba eo amin’ny dahalo sy ireo tafika mba tsy hahatamana ireo olona mahay manao fanafody bala, avy any Mandoto.